स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? हात हेरेर थाहा पाउनुस् – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यस्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? हात हेरेर थाहा पाउनुस्
स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? हात हेरेर थाहा पाउनुस्
मोस्चराइजर प्रयोग गर्दागर्दै पनि हात खस्रो छ या चिलाउँछ भने ‘एक्जिमा’ भएको हुन सक्छ । तर, के भएको हो भन्ने तय भने छाला रोग विशेषज्ञले नै गर्न सक्छन्।